Top Ten Center Raw Raw
Waxay ka badan tahay kala-badh illaa 2021. In kasta oo waddamada iyo gobollada adduunka qaarkood weli ku hoos jiraan hargabka cusub ee faafa, iibka alaabada caafimaad ee dabiiciga ahi way sii kordhayaan, dhammaan warshadaha ayaa keenaya muddo horumar degdeg ah. Dhawaan ...
Ku soo dhawow Booth B01-11
Ruiwo Ka Qaybgal WPE & WHPE2021 Ku soo dhawow inaad nagu soo booqato Booth No. B01-11. inta lagu jiro Julaay 28-30, 2021! Kaalay halkan cabitaan, in yar nasasho. Waxaa laga yaabaa in xoogaa yaab ah ay adiga ku sugayaan.
5-Hydroxytryptophan (5-HTP) waa amino acid oo ah talaabada dhexe ee udhaxeysa tryptophan iyo serotonin kiimikada maskaxda muhiimka ah. Waxaa jira qaddar aad u tiro badan oo caddayn ah oo soo jeedinaysa in heerarka serotonin-ka oo hooseeya ay yihiin fikrad caadi ah ...
Kormeerka Saldhigga Shaaha
Macaamiisha Mareykanka waxay u yimaadeen Shiinaha inay soo indha indheeyaan saldhigga dhirta shaaha. Shiinaha wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ah geedka shaaha. Tikniyoolajiyadda lagu farsameeyo shaaha adduunka ayaa dhammaantood asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha. Booqashada macaamiisha Mareykanka waxay xambaarsan tahay ruuxa wadada xariirta. ...
Booqasho 5 Dal oo Bariga Yurub ah
Waaxda Ganacsiga Shaanxi ee Gobolka oo ay weheliso maareeyaha guud ee Ruiwo ayaa booqday 5 Dal oo Bariga Yurub ah si ay uga wada shaqeeyaan midba midka kale iskaashi qoto dheer.
Booqasho Machadka Faransiiska ee Botany
Maamulaha guud ee Ruiwo wuxuu booqday Machadka Faransiiska ee cilmiga dhirta isgaarsiinta iyo barashada. Faransiiska wuxuu kujiray meesha ugu horeysa ee cilmi baarista cilmiga dhirta markasta, qani ku ah khibradaha cilmi baarista iyo natiijooyinka.
Booqasho Wasaaradda Ganacsiga Hungary
Maamulaha guud ee Ruiwo wuxuu booqday Wasaaradda Ganacsiga ee Hungary, isagoo si qoto dheer oo saaxiibtinnimo leh uga wada hadlay iskaashi dheeri ah.
Iskaashiga Waaxda Dhirta Afrika
Afrika waxay ku faantaa keymo aad u badan oo kuleyl ah oo leh kheyraad bayooloji oo fara badan waana mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro alaabta ceeriin. Ruiwo waxay iskaashi kala samaysay Waaxda Dhirta Afrika ee alaabta ceeriin.